Iintlupheko: Ifu eliPhikisanayo
Ngoxa ungeke uqaphele ukungqubuzana negama ngamagama, mhlawumbi ubabone amaxesha amaninzi ngaphambili. Umzila welifu wabona emva kwendiza yokudlula i-jet, imilayezo kunye nobuso obuhle obushushu obubanjwe esibhakabhakeni sasebusika elunxwemeni; le yimizekelo yezinto eziphambeneyo.
Igama elithi "contrail" lincinci kwindlela yokumisela , oku kubhekiselelwe kwindlela amafu afana ngayo emva kweendlela zokuhamba kwendiza.
Iintlupheko zibhekwa njengamafu aphezulu .
Zibonakala ngathi zide kwaye zincinci, kodwa zininzi, imigca yamafu, ihlala ihamba ngamabindi amabini angaphezulu kunye nangaphezulu (inani leemigangatho linqunywe inani leenjini (ukuqhaqhaqhawula) okanye amaphiko unayo). Uninzi lunamafu emfutshane, luhlala ixesha elide ngaphambi kokuba luqhume. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwiimeko zemozulu, kunokwenzeka ukuba bahlale iiyure zokugqibela okanye iintsuku. Abo bahlala ngokugqithiseleyo bathambekele ekusasazeni kwindawo encinci ye-cirrus, eyaziwa ngokuthi contrail cirrus.
Yintoni Ebangelwa Iintlupheko?
Ukuphambana kunokwenza ngenye yeendlela ezimbini: ngokudibanisa umphunga wamanzi emoyeni ukusuka kwendiza, okanye utshintsho olukhawuleza kwingcinezelo eyenzekayo xa umoya ujikeleza ngeephiko zamaphiko.
Ukuqhawula umkhuhlane: Ukugqithisa ukukhutshwa kwamanzi kuyona hlobo oluqhelekileyo lwe-contrail. Njengoko indiza isebenzisa uphethiloli ngexesha lokuhamba, ukukhupha ukuphuma ngaphandle kweenjini, ukukhulula i-carbon dioxide, umphunga wamanzi kunye ne-soot emoyeni. Njengoko oku kushushu, umoya omanzi udibanisa nomoya obandayo uhlahlela kwaye uxhoma kwi-soot kunye neengqungquthela ze-sulphate ukwenza i-contrail cloud yangaphakathi. Ngenxa yokuba kuthatha imizuzwana emininzi yomoya okhuphayo ukupholisa ngokwaneleyo kwaye uxoxise, i-contrail ibonisa ukuba ngumgama omfutshane emva kwendiza. Yingakho i-gap ibonakala iphakathi komsila wendiza kunye nokuqala kwefu.
Iphiko lephiko eliphikisayo: Ukuba i-air aloft iyancipha kwaye iphantse izalisekile, ukuhamba komoya malunga namaphiko eenqwelo zamanzi kungakhokelela ekuncediseni. Umoya ogeleza phezu kwephiko unengcinezelo engaphantsi kuneleyo ehamba ngaphantsi kwawo, kwaye ngenxa yokuba umoya uhamba ukusuka kwiindawo eziphakamileyo ukuya kwiindawo ezincinci, uhambo lwangoku luphuma kumgangatho wephiko ukuya phezulu. Ezi ntshukumo zidibanisa ukwenza ityhubhu yokujikeleza umoya, okanye i-vortex, kwiphiko lephiko. Ezi vortices ziindawo zokunciphisa uxinzelelo kunye nokushisa kwaye ngoko ke kunokukhokelela umphunga wamanzi ukuba ulungise.
Ekubeni ezo ziphoso zifuna umoya omanzi (umswakama ophezulu) ukuqala, zivame ukuvela kwindawo ephantsi apho umoya ufudumala, uninzi kakhulu, kwaye unako ukugcina umphunga wamanzi.
Ngaba negalelo kwiTshintsho lwemozulu?
Nangona ukuphazamiseka kucatshangelwa ukuba kunempembelelo encinci kwimozulu , impembelelo yabo kwiipatheni zokushisa zemihla ngemihla ibaluleke kakhulu. Njengoko ulwaphulo luselula kwaye lugxininisa ukuze lube luqhaqhozo lwe-currus, lukhuthaza ukupholisa emini (i-albedo yabo ephezulu ibonisa ukukhanya kwelanga ezayo ngaphakathi kwithuba) kunye nokufudumala ebusuku (amaqondo aphezulu, amancinci athatha imisebe ye-longwave ephumayo yomhlaba). Ubukhulu balobu bushushu kucingwa ukuba bube ngaphezu kwemiphumo yokupholisa.
Kufuneka kwakhona kuqaphele ukuba ukubunjwa kwe-contrail kudibaniswa nokukhululwa kwe-carbon dioxide, eyaziwa yi-greenhouse gas kunye negalelo lokufudumala kwehlabathi .
Abanye abantu, kuquka i-theorists yoqhelo, baneengcamango zabo malunga nokuchasana kunye noko bakukho. Esikhundleni sokunciphisa, bayakholelwa ukuba ziimichiza, okanye "i-chemtrails," zifakwe ngamabomu ngemibutho karhulumente kubantu abangaboniyo phantsi. Bathetha ukuba ezi zinto zithunyelwa emoyeni ngenjongo yokulawula imozulu, ukulawula abantu, kunye nokuvavanywa kwezixhobo ze-biological, kwaye ukuba imbono yokuchasana njengamafu angenakubungozi.
Ngokutsho kwabathengayo, ukuba impazamo ibonakala kwi-cross-cross, i-grid-like, okanye i-pat-tac-toe pat patterns, okanye ibonakala kwiindawo apho kungekho zikhokelo zendiza-moya, kukho ithuba elihle ukuba alikho into ephikisayo.
Isicwangciso seSifundo seSayensi
Ukushisa kweFusion Definition
I-Mercury Facts (Element)
Ukususa i-Sugar Emanzini: Iikhemikhali okanye i-Physical Change?
Indlela yokubala ubukhulu be-Atomic
Uludwe lwezinto eziphathekayo zeMpahla
I-12 Eninzi yeBlue Blue, i-Violet ne-Mineral Minerals
Indlela yokusebenzisa iSitraal Streak Ukuchonga iSampuli zeeDombo
Uluhlu lweempawu ezixabisekileyo
Indlela yokusebenzisa iNgcaciso yesiFrentshi 'kwiCause de' ('Ngenxa ye')
Eyona ndlela ephantsi kakhulu kwi-Golf Men Major: I-All-Time Bests
Ukuphuhliswa kweMihlaba yaseMelika yokuqala kunye neMfazwe Yehlabathi I
Ngaba Ndinokuqala Ngama-Homeschooling Mid-year?
Ukudala iiFom kwi-Microsoft Access 2007
Intshayelelo kwi-1 Korinte
Inkcazo kunye nemizekelo yeeNtsingiselo eziHlangeneyo
Izinto ezi-8 zokuziwa Ngaphambi kokuthenga iPiano esetyenziswayo
I-Best Best High High ihluleka Konke ixesha
Iingqungquthela ezimbi kakhulu zehlabathi
Ngaba Unokubandezeleka kwi-Constipation?
Okugqwesileyo kweChicago Blues
Iintlanu zeTLC eziPhambili kakhulu
'Iingxelo zeKarimesi yeKarimesi'
Zingaphi Iimpembelelo Zibhobho yeGolf?
I-Sikhism Clergy Terms kunye Nento Eyithethayo
Ukuphonononga - Undithanda, iNtlekele, kunye neNkwenkwezi
UkuCandwa kunye neNcwadi yokuVikela eMelika